“Kooxdee hada u gudubtay kulanka finalka?” – Robertson oo ku jees jeesay Luis Suarez – Gool FM
“Kooxdee hada u gudubtay kulanka finalka?” – Robertson oo ku jees jeesay Luis Suarez
(Yurub) 08 Maajo 2019. Daafaca kooxda Liverpool Andrew Robertson ayaa ka careysiiyay weeraryahanka Barcelona ee Luis Suarez, kaddib markii ay xalay Reds u gudubtay finalka tartanka Champions League.
Andrew Robertson ayaa qaab ciyaareed wanaagsan sameeyay qeybtii hore ee ciyaarta, laakiin labo jeer uu waxyeelo kala kulmay Luis Suarez ayaa keentay in ciyaarta uu dhaawac ahaan kaga baxo, waxaana badalkiisa la keenay Georginio Wijnaldum isla bilawga qeybta labaad ee ciyaarta.
Hadaba ciyaarta kaddib ayaa Andrew Robertson la weydiiyay su’aal ku saabsaneyd dhaawaca soo gaaray uu sababteedu lahaa Luis Suarez wuxuuna ku jawaab celiyay:
“Kooxdee hada u gudubtay kulanka finalka?, dabcan waa anaga, waa intaas waxa ugu muhiimsan, Georginio Wijnaldum ayaa buuxiyay booskii aan ka baxay wuxuuna dhaliyay 2 gool, waxba igama galin haatan Luis Suarez”.
“Waxaan sheegay marar badan, laakiin koox ahaan, waxaan rumeysanahay nafteena, dadku wey na fogeeyeen, laakiin waxaan aamisaneyn in hadii aan sameyno bilaabasho fiican aan qaban karno shaqo muhiim ah”.